« Forme grave » | NewsMada
« Forme grave »
Par Taratra sur 30/05/2020
Raha efa miomanomana sy mandamina ny fandaharam-potoany amin’ny fiatrehana ny fialan-tsasatra, ny fanaovana fizahantany… ny any amin’ny firenen-kafa any ivelany, ny eto amintsika kosa… mbola tena baraingo. Raha ny fihazakazaky ny tarehimarika avoakan’ny CCO isan’andro, momba ny antontanisa mikasika ny isan’ny marary, ny tranga vaovao, ny isan’ny maty, ny fitombon’ireo faritra ihanahan’ity valanaretina Coronavirus ity, mbola lavitry ny afo ny kitay, ary « mbola ho ela ity », hoy ilay mifatotra » », araka ny fitenenana.
Miteny ho azy ny antontanisa e. Afakomaly fotsiny, ohatra, araka ny tatitra nambaran’ny CCO, omaly, 42 ireo olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina Coronavirus, niampy telo, izany hoe, niakatra ho dimy ireo namoy ny ainy. 692 ny fitambaran’ny trangan’ireo olona mitondra ny valanaretina. Ho tratra na mety hihoatra ny 700 izany, afaka fotoana fohy monja. Vitsy dia vitsy, raha oharina amin’ny isan’ny mponina, any amin’ireo faritra efa ahitana ity Covid-19 ity, ny isan’ny fitiliana natao; 10 249 fotsiny, nanomboka teo amin’ny tapaky ny volana marsa, hatramin’ny alarobia teo.
Tapa-bolana indimy, izany hoe, roa volana mahery izay no niainana ny “fahamehana ara-pahasalamana”, sy ireo fepetra samihafa nanahirana ny rehetra, miaraka amin’izany. Inona ny hambaran’ny fitondrana amin’ny asabotsy izao, amin’ny alalan’ny filankevitry ny minisitra toy ny fanao hatramin’izay, sy izay hambaran’ny filoham-pirenena mifandraika amin’izany, amin’ny alahady izao… alahady ahatsiarovana ny nilatsahan’ny Fanahy masina? Asa, miandry ny rehetra fa raha izao toe-javatra mitranga izao, tsy sanatria famendrofendroana fa tena “forme grave”, toy ny mahazo ireo marary miisa sivy tratran’ity valanaretina Corinavirus ity.